နေ့စဉ်အသက်တာ၌အဖော်အချွတ်မညီကြောင်းပါသလဲ | ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်အခမဲ့အရောင်စာမျက်နှာများ
2 ။ တိုက်ခန်းအတွက်အဝတ်အချည်းစည်းပြောင်းရွှေ့
5 ။ ရေကူးအဝတ်အချည်းစည်း
အဖော်အချွတ် - သူတို့ပဲပုံမှန်အချို့, အခြားသူများကရှက်ကြောက်ခြင်းနှင့်အစားကရှောင်ရှားနေစဉ်။ မဟုတ်လူတိုင်းချွေးပေါင်းအိမ်များတွင်တစ်ခုသို့မဟုတ် nudist ကမ်းခြေမှာအပန်းဖြေဖို့အားလပ်ရက်အပေါ်သွားကြဖို့သည် .naturiste တစ်စခန်းချမှာဝံ့။ သို့သော်အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်?
နေ့စဉ်အသက်တာ၌အဖော်အချွတ် - အဝတ်အချည်းစည်းသင့်ကိုယ်ပိုင်အိမ်မှာ?
1 ။ အဝတ်အချည်းစည်းအိပ်
တစ်ခုမှာပထမဦးဆုံးအပေါင်းတို့၏အဝတ်အချည်းစည်းအိပ်ရန်စတင်နိုင်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ခံစားရ့စုံတွဲတစ်တွဲအဖြစ်တတ်နိုင်သမျှတစ်ဦးတည်းဖြစ်ရန်။ သငျသညျချွေးစိုစွတ်သောကြောင်းမဆိုအဝတ်အစားဝတ်ဆင်နေ, အထူးသဖြင့်နွေရာသီအတွက်တစ်ဦးကကောင်းတဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး။
အဘယ်သူသည်အိမ်တွင်သည်နှင့်အလုပ်လုပ်ရန်ရှိသည်ပါဘူး, စျေးဆိုင်သို့မဟုတ်ရက်စွဲများ, ဒါပေမယ့်တောင်မှအိမ်မှာန်းကျင်အဝတ်အချည်းစည်းလမ်းလျှောက်ခြင်း, ဥပမာအားဖြင့်, ကို clean up နိုင်ပါတယ်။ သို့မဟုတ်သင်သည်အိပ်ရာပေါ်မှာသေးငယ်တဲ့မျက်နှာသုတ်ပုဝါကိုတင်ပေါ်မှာထိုင်ကာစာအုပ်၌ရှိသကဲ့သို့အပန်းဖြေ။ ဒါဟာသူတို့ကိုယ်သူတို့မှန်၌ဖြစ်စေဂီတကခုန်ရုံအကြောင်းကိုစဉ်းစားရန်လည်းဖြစ်နိုင်သည်။
3 ။ အဝတ်အချည်းစည်းကိုစား
သငျသညျပြီးသားထိုင်လျှင်, အဝတ်အစားမပါဘဲမိမိအစာစားပြီးယူဖို့လည်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ဒီအဘို့, အစားအစာကိုလည်းပြီးသားစားပွဲပေါ်ကြိုတင်အဝတ်အချည်းစည်းကိုဖန်ဆင်းနိုင်ပါသည်။ အဘယ်သူသည်နှစ်ယောက်ရဲ့ချောကလက်မုန့်, စတော်ဘယ်ရီနှင့်မုန့်နှင့်အတူ, ဥပမာ, တစ်ဦးချင်းစီကတခြား၏မတ်ေတာဘဝတက်မြိန်ဖို့အခွင့်အလမ်းရှိပါတယ်။
4 ။ အဝတ်အချည်းစည်းနေပူထဲ
တစ်ခုဖြစ်သည်ရေချိုးဝတ်စုံသို့မဟုတ်အခြားအဝတ်အစားမပါဘဲ basks အခါဘုနျးကွီးသော။ ဥပမာများအတွက်, ကိုယ်ခန္ဓာပေါ်တောက်တောက်အစက်အပြောက်ဆက်လက်တည်ရှိစေခြင်းမရှိဘဲ tan ချောမွေ့စွာလုပ်နိုင်တဲ့အိမ်နီးချင်းသူတို့ကိုမမြင်နိုင်သို့မဟုတ်အမြင်ကနေ correspondingly မြင့်မားသောအထည်သည်မြို့ရိုးသို့မဟုတ်ထီးနှင့်ကိုယ်ကိုကာကွယ်ပေးရန်လျှင်, သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဥယျာဉ်၌ဖြစ်လိမ့်မည်။ ပုဂ္ဂလိကဥယျာဉ်ကိုပစ္စုပ္ပန်သည်မဟုတ်တစ်ခုသို့မဟုတ်အိုင်ပေါ်မှာစီးချင်တဝတ်လစ်စလစ် sunbathing ဖြစ်နိုင်ရှိရာ, အွန်လိုင်းနေတဲ့ကမ်းခြေများအတွက်ကြိုတင်ရှာအံ့သောငှါသင့်ပါသည်။ အဆိုပါအမျိုးသမီးအားဖြင့်အဝတ်အချည်းစည်းနေပူထဲမပေးဝံ့သူကားအဘယ်သူ, ဧကန်အမှန်သာနေထဲမှာ topless အိပ်တစ်ကြိမ်ကြိုးစားနိုင်ပါ။ ထိုအခါကလုံးဝအဝတ်ချန်လှပ်, လာမယ့်အကြိမ်တစျခုအတှကျနေဆဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ရေကူးဝတ်စုံမပါဘဲရေကူး sunbathing ပြီးနောက်အောက်ပါအတိုင်း။ ဒီနေရာတွင်တဦးတည်းရိုးရှင်းစွာကိုယ်တော်တိုင်နှင့်အေးမြရေသာခံစားရ၏။
6 ။ မိုးရွာအတွက်အဝတ်အချည်းစည်းရပ်
ဒီအတှကျအသငျသညျအဘယ်သူမျှမနေတဲ့ပန်းခြံဒါမှမဟုတ်အိုင်ပေါ်မှာ, ထိုကဲ့သို့သောသင့်ကိုယ်ပိုင်ဥယျာဉ်၌အဖြစ်, သင်မြင်သည်အဘယ်မှာရှိအစက်အပြောက်လိုအပ်ပါတယ်။ သငျသညျအအေးမိရှိသည်နှင့်ထို့နောက်လည်းနွေးနွေရာသီမိုးရွာရွာဖမ်းမိဘူးဆိုရငျ, ကသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခန္ဓာကိုယ်နှင့်မိုးရေစက်ခံစားရရန်ဖြစ်နိုင်သည်။
7 ။ ဝတ်လစ်စလစ်ဓာတ်ပုံများအောင်
နီးပါးတိုင်းမိုဘိုင်းဖုန်းယခုကင်မရာကျော်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့မဟုတ်သင်တူညီသောကြောင့်များအတွက်အရည်အသွေးမြင့်ကင်မရာထုတ်လုပ်ယူနိုင်ပါတယ်။ စိတ်ရင်းအဘို့အခွင့်အလမ်းများ, အလုံအလောက်ရှိပါတယ်။ အိပ်ရာပေါ်ဒါမှမဟုတ်အိပ်ရာပေါ်အဝတ်အချည်းစည်းဥပမာဟန်ဆောင်ထားတဲ့လူ, ။ ဒါဟာဥပမာချက်ပြုတ်ဖို့, သို့မဟုတ် Self-timer နေရာမှာသုံးပြီးစန္ဒရားနှင့်စာနယ်ဇင်းဓာတ်ပုံများကစားရန်အဝတ်အချည်းစည်းတစ်ခု tripod အပေါ်ကင်မရာကိုနေရာချဖို့လည်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။ တစ်ဖက်ရှိပြီးသူတို့ကိုအံ့သြသွားချင်သူမည်သူမဆိုဥပမာ, သင့်ကိုယ်ပိုင်ဝတ်လစ်စလစ် LOCATION ပါဝင်သောပြက္ခဒိန်မှာလည်းတူညီတဲ့တဲ့ professional ဓာတ်ပုံကိုစတူဒီယိုကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏ရှေ့မှောက်၌အတူတကွသို့မဟုတ်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားဆန့်ကျင်လောကအတွက်။
sexting - သို့သော်ဝတ်လစ်စလစ်ဓာတ်ပုံများထွက်ကြည့်ပါ။ တစ်ဦးကအန္တရာယ်ရှိလမ်းကြောင်းသစ်!
ဒါကြောင့်ခက်ခဲအဝတ်အချည်းစည်းကွဲပြားခြားနားသောအမှုတို့ကိုပြုမှမဟုတ်ပါဘူး။ သငျသညျ, ထိုသည်ကိုသာပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းကိုယူဝံ့ရန်ရှိသည်။ တဦးတည်းကဒီတားစီးကျော်လွှားပြီးပါက, သင်သည်သူ၏အံ့သြဖွယ်ခန္ဓာကိုယ်ခံစားရနှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်ရိုးရိုးအဝတ်မပါဘဲခံစားရနိုင်ပါတယ်။
သင်ကိုယ်တိုင်မယုံကြည်ကြပါလျှင်စကားမစပ်, မိတ်ဆွေတစ်ဦးနှင့်အတူအမျိုးသမီးနှင့်အမျိုးသားများတစ်ဦးရဲ့ buddy နဲ့ဒီဝတ်လစ်စလစ်-Self-စမ်းသပ်လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ခဏတစ်ပြီးနောက်, များစွာသောသို့သော်ဝတ်လစ်စလစ်-ဖြစ်လျက်ရှိ ပို. ပင်လှပမကြာခဏကြိမ်အမြဲ unclothed ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြုမူဆက်ဆံကြောင်းသတိပြုပါ။
သူ့မိဘ - မိတ်ဆွေတို့ကိုရှိနေဆဲ | ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း
နိုင်ငံရေးဆိုတာဘာလဲ - အဘယ်ကြောင့်တစ်ဦးကိုရွေးချယ် ...
တစ်ဦးကငှက်မင်္ဂလာဆောင်စေခငျြတ - မှတ်စုနှင့်စာသား
ကဗျာတစ်ပုဒ်ကဘာလဲ | စာပေကိုဖတ်စာအုပ်များ